Ny Bokin’ i Môrônia
Nanoratra ho tombontsoan’ny Lamanita i Môrônia—Ny Nefita izay tsy te handà an’ i Kristy dia novonoina ho faty. Tokony ho 401–421 taorian’ i J.K.
Nanome fahefana ny mpianatra Nefita roa ambin’ ny folo i Jesoa hanolotra ny fanomezana ny Fanahy Masina. Tokony ho 401–421 taorian’ i J.K.
Nanokana mpisorona sy mpampianatra ny loholona tamin’ ny alalan’ ny fametrahan-tanana. Tokony ho 401–421 taorian’ i J.K.
Fanazavana ny fomba nitantanan’ ny loholona sy ny mpisorona ny mofon’ ny fanasan’ ny Tompo. Tokony ho 401–421 taorian’ i J.K.
Fanomezana ny fomba fitantanana ny divain’ ny fanasan’ ny Tompo. Tokony ho 401–421 taorian’ i J.K.
Natao batisa sy noraisina ho namana ny olona nibebaka—Ny mpikamban’ ny fiangonana izay nibebaka dia navela heloka—Notarihina tamin’ ny herin’ ny Fanahy Masina ny fivoriana. Tokony ho 401–421 taorian’ i J.K.
Nomena ny fanasana hidirana ao amin’ ny fitsaharan’ ny Tompo—Mivavaha amin’ ny finiavana marina—Nahafahan’ ny olona nanavaka ny tsara tamin’ ny ratsy ny Fanahin’ i Kristy—Mandresy lahatra ny olona handà an’ i Kristy sy hanao ny ratsy i Satana—Naneho ny fiavian’ i Kristy ireo mpaminany—Amin’ ny finoana no anaovana fahagagana sy anompoan’ ny anjely—Tokony hanantena ny fiainana mandrakizay sy hifikitra amin’ ny fiantrana ny olona. Tokony ho 401–421 taorian’ i J.K.
Fahavetavetana ratsy ny batisan’ ny ankizy madinika—Velona ao amin’ i Kristy ny ankizy madinika noho ny Sorompanavotana—Mitondra any amin’ ny famonjena ny finoana, ny fibebahana, ny fahalemem-paika sy ny fietren’ ny fo, ny fandraisana ny Fanahy Masina, ary ny faharetana hatramin’ ny farany. Tokony ho 401–421 taorian’ i J.K.
Ny epistily faharoan’ i Môrmôna ho an’ i Môrônia zanany lahy.
Mahafaoka ny toko 9.
Namohehatra sy niharatsy na ny Nefita na ny Lamanita—Nifampahory sy nifamono izy ireo—Nivavaka i Môrmôna mba hitoetra amin’ i Môrônia mandrakizay ny fahasoavana sy ny hatsaram-po. Tokony ho 401–421 taorian’ i J.K.
Ny fanambaran’ ny Bokin’ i Môrmôna dia tonga amin’ ny alalan’ ny herin’ ny Fanahy Masina—Tsinjaraina ho an’ ny mahatoky ny fanomezam-pahasoavan’ ny Fanahy—Miaraka mandrakariva amin’ ny finoana ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy—Miteny avy ao amin’ ny vovoka ny tenin’ i Môrônia—Manatòna an’ i Kristy, aoka ho tanteraka ao Aminy ary hamasino ny fanahinareo. Tokony ho 421 taorian’ i J.K.